South Asia and Beyond: डा केसीविरुद्ध रिटः घर जलेको के चिन्ता, जुनकीरीले पो पोल्छ त!
डा केसीविरुद्ध रिटः घर जलेको के चिन्ता, जुनकीरीले पो पोल्छ त!
अनन्तराज लुईटेल र केदार लुईटेल नामक दुई मनुवा डा गोविन्द केसी विरुद्ध गुहार माग्दै सर्वोच्च पुगेछन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, जसका विरुद्ध जो अदालत जाने छुट पनि छ ।
तर यी मनुवालाई तब पीर पर्छ कि पर्दैन, जब एउटा व्यापारीको सामान्य कामदारले देशको प्रधान न्यायधीशलाई ‘दारी’ भनेर सम्बोधन गर्दै उसलाई आफैं दुई करोड रुपैयाँ तिरेको दाबी गर्छ? त्यो पनि फेल हुने विद्यार्थीलाई पास गराउने वाचासहित मेडिकल विद्यार्थी नामक शिकारहरुलाई जालमा फसाउनका लागि?
यिनलाई अन्यायबोध हुन्छ कि हुँदैन जब वर्षेनी दुई हजार अयोग्य डाक्टर हुने र तिनले आगामी पचास वर्षसम्म नेपालीहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने अवस्था कायम हुन्छ?
यिनलाई चासो हुन्छ कि हुँदैन, जब काउन्सिलको पदाधिकारीले मेडिकल कलेजसित दामासाहीले दश लाख रुपैयाँ लिन्छ र त्यही हिसाबले सीट दिन्छ?
यिनलाई अदालत जान मन लाग्छ कि लाग्दैन जब सरकारी स्वास्थ्य संस्था धराशायी हुन्छन् र निजी अस्पताल मानिसलाई घरवारविहीन बनाउने कारण बन्छन्?
यिनलाई पीर पर्छ कि पर्दैन जब निष्पक्ष रेफ्रीको भुमिकामा हुनुपर्ने अख्तियारप्रमुख आफैं खेलाडी बनेर दौडँदै खास मेडिकल कलेजका लागि गोल गरिदिन्छ र बदला लिनुपर्नेमाथि छानविनको अन्तहीन श्रृंख्ला शुरु गरिदिन्छ?
एकातिर डढेलोको लप्कोले घर जलाउन लागिसक्यो, यी दुई मनुवालाई उता जुनकिरीले पोल्ला कि भन्ने चिन्ता छ ।
उसो त त्यस्तो लाजमर्दो स्टन्टमा लाग्ने उनीहरु एक्लै छैनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै कर्मचारी संगठनले अस्ति मात्र डा केसी विरुद्ध अदालत र अख्तियार गुहारेको थियो ।
भाग्यवश देश अहिले घर जलिरहेको कुरामा चिन्तित छः भ्रष्ट प्रधान न्यायधीश, भ्रष्ट सर्वोच्चको रजिष्ट्रार, भ्रष्ट पुनरावेदनका न्यायधीश, भ्रष्ट काउन्सिलका पदाधिकारी ,भ्रष्ट विश्वविद्यालयका पदाधिकारी । अन्तहीन दण्डहीनताबाट कसरी पार लाग्ने भनेर नागरिकहरु चिन्तित छन् र धेरैले आआफ्नो ठाउँबाट डा केसीको निःस्वार्थ अभियानलाई साथ दिइरहेका छन् ।
विचल्लीमा छन् विद्यार्थी र अभिभावकहरु ।
मेडिकल शिक्षाको नाममा सांगोपांगो दलाली मात्र भएको प्रमाणित भइसकेको छ । ।
यो बेथिति नबिझाउने यी लुइँटेल बन्धुहरुलाई एउटा सानो कोठामा भोकै पल्टेका डा केसीले देशै डुबाउन लागेको चिन्ता छ ।
धन्य, जलेको घर नदेखेर जुनकीरीसित तर्सिने लिलिपुटहरु ।
भन्छन् नि, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ ।
Posted by Jiwan Kshetry at 8:18 PM